Faiba glaasi window ihuenyo idozi patches - China Wuqiang County Huili faiba glaasi
Faiba glaasi window ihuenyo idozi patches
Faiba glaasi window ihuenyo idozi patch nwekwara aha ya bụ faiba glaasi Screen idozi Kit, Self Stick Screen Patch, ihuenyo idozi kwachie, faiba glaasi enyocha kwachie.
Nyagide kụziri faiba glaasi patches eji mmezi oghere na anya mmiri na window meziri ma ọ bụ ihuenyo ụzọ. Ọ dịghị ngwaọrụ chọrọ. 5 Pack ihe: faiba glaasi agba: Unyi Self arapara ihuenyo idozi patch Metụtaruru: 3 "Obosara: 3" mee ịrụzi oghere na anya mmiri na window meziri ma ọ bụ ihuenyo ụzọ No ngwaọrụ chọrọ. Carded.
Otú ndozi a adọwa ihuenyo
1: Bee si oghere
Bee a square oghere gburugburu adọka eji a mee na-egbusi na ịba uru mma. Nọgidenụ na oghere dị ka obere ka o kwere na-ahapụ dịkarịa ala 1/2 na. Ochie ihuenyo na-esote na metal eku.
2: mama na kwachie
Bee a kwachie nke faiba glaasi enyocha na uche n'apata 1/2 na. N'elu onye ọ bụla ihu. Kpakọọrọ wax akwụkwọ n'okpuru window ihuenyo na-mama si n'ịnọgide na workbench. Na etiti patch n'elu onu, etinye a bead nke mama gburugburu onu, na-agbasa mama site kwachie na window ihuenyo site na a ewepụghị osisi mkpisi.
Ọ bụrụ na ị na-nri na anwụnta buzzing gburugburu gị isi ma na-edebe gị n'ụra abalị niile, otú banyere ịrụzi na ihuenyo? Patches ga-ahụ na ike anya a bit tacky, ma ọ bụrụ na dọkatụrụ adọka bụ nnukwu ma ọ bụ ihuenyo bụ na a ukwuu anya ebe, dochie dum ihuenyo. Ma ọ bụghị ya, na-20 nkeji na dị nnọọ n'akwa onu.
Ọ bụrụ na gị na ihuenyo bụ faiba glaasi (ọ ga na-eche dị ka ákwà), ịzụta 1/2 ft. Of ọhụrụ faiba glaasi screening kwụsịrị mpịakọta na ngwaike ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ụlọ center ma ọ bụ na-arịọ maka a ole na ole obere cutoffs. Ọzọkwa bulie ma a roba dabeere mama ma ọ bụ Super mama jel. Mgbe ahụ na-eso Photos 1 na nke 2. Ihe bụ isi a mma-na-achọ mmezi na-ejide mee tightly megide workbench otú i nwere ike ime ka a dị ọcha cutout (Photo 1).
Ọ bụrụ na ị nwetara ihe aluminum ihuenyo na a obere onu, ịzụta a kwachie kit na ngwaike ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ụlọ center. Ọ ga-ebu ọtụtụ precut 1-1 / 2-na. patches na preformed nko na eriri ozugbo na ihuenyo.